कसको आयोजनामा हुँदैछ भोलि नेपाल बन्द ? अवज्ञा गर्नेमाथि यस्तो कडा कारवाहीको चेतवानी, पत्रसहित — Sanchar Kendra
कसको आयोजनामा हुँदैछ भोलि नेपाल बन्द ? अवज्ञा गर्नेमाथि यस्तो कडा कारवाहीको चेतवानी, पत्रसहित
काठमाडौँ । काम चलाउ ओली सरकारले संविधानलाई बेवास्ता गर्दै संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा बिहीबार देशव्यापी आम हड्ताल घोषणा गरिएको छ । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले बिहीबार देशव्यापी आमहड्तालको घोषणा गरेको हो ।
प्रचण्ड नेपाल पक्षको केन्द्रीय संघर्ष समितिले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै देशव्यापी आमहड्तालसहित नयाँ संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो। बन्द अवज्ञा गर्नेमाथि कारवाही गरिने उक्त समुहले जनाएको छ ।
यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको जारी तेस्रो चरणको संघर्षका कार्यक्रमलाई परिमार्जित गर्दै आम हड्ताल घोषणा गरिएको नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले जनाएको छ । प्रचण्ड माधव पक्षले असंवैधानिक र गैरकानुनी ढंगले संवैधानिक अंगमा पदाधिकारीहरुलाई सपथ खुवाईएकोमा सो पक्षले भत्र्सना गरेको पनि गरेको छ ।
त्यस्तै प्रतिगमनलाई असफल पार्न जुनसुकै कदम चाल्न आवश्यक रहेकाले सवैलाई सहयोग गर्न आग्रह पनि गरेको छ । आम हड्तालमा बजार, शिक्षण संस्था, यातायातलगायत बन्द रहेपनि अत्यावाश्यक सेवा भने बन्द नगर्ने सो पक्षले जनाएको छ । त्यसका लागि आजै साँझ मसाल जुलुस निकालिने पत्रकार सम्मेलनमा नेतृ पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् ।
नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले सरकारले बुधबार गरेका संवैधानिक निकायका नियुक्ति बलमिच्याइँपूर्ण कदम भएको टिप्पणी गरेको छ । बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले बलमिच्याइँपूर्ण कदमसहित देशलाई गुण्डाराजतिर अगाडि बढाउन खोजेको आरोप लगाए । त्यसैकारण बाध्य भएर आफूहरुले बिहीबारका लागि आम हड्तालको कार्यक्रम घोषणा गरेको उनले दाबी गरे ।
‘केपी नेतृत्वको सरकारले संविधान, कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, राजनीतिक संस्कृति सबलाई उपेक्षा गरेर नांगो रुपमा देशलाई गुण्डाराज, फाँसीवादतिर अगाडि बढाउने कुचेष्टा गरिराखेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसकारण प्रतिगमनविरुद्ध, संविधान र लोकतन्त्रको निम्ति शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिराखेका थियौं । र, अब पनि आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने नै छ । आमहड्ताल पनि शान्तिपूर्ण नै हुनेछ ।’
सरकारले विप्लव नेतृत्वको पार्टीसँग वार्ताका लागि इमान्दारीपूर्वक गरेको पहलकदमी नभएर नाटक गरेको श्रेष्ठले बताए । ‘सरकारले विप्लवसँग वार्ता गर्ने, साँच्चै शान्तिपूर्ण रुपमा राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न कहींकतैबाट भएको भए त्यसलाई सधैं स्वागत र सकारात्मक रुपमा लिन्छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, यो नाटक हो । कुनै सुनियोजितपूर्वक गरेको वा इमान्दार पहलकदमी होइन ।’
हिजोसम्म अराजकताको नमुना भएको भन्दै श्रेष्ठले ओली आज अराजकताको पराकाष्टको नमुना भएको आरोप लगाए । ‘हिजोसम्म उहाँ अराजकताको नमुना हुनुहुन्थ्यो । अहिले सरकारी गुटको नेता हुनुहुन्छ, यो देशको हैन । अहिले अराजकताको पराकाष्टको नमुना हो ।’ श्रेष्ठले भने ।
महड्तालका क्रममा के बन्द हुन्छ के-के खुल्छ ?
बिहीबारका लागि आह्वान गरेको आमहड्तालका क्रममा अस्पताल, एम्बुलेन्स, पानी, दूध, औषधिलगायतका अत्यावश्यक सेवाहरुमा अवरोध नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । यस्तै विद्यार्थीहरुको परीक्षा सञ्चालनमा पनि कुनै अवरोध हुनेछैन ।
प्रचण्ड नेपाल पक्षले आन्दोलनका कार्यक्रमबारे जानकारी दिन बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यातायत, पसल, उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना र शिक्षण संस्था बन्द हुने जानकारी दिइएकाे हाे ।
पत्रकारसम्मेलनपछि वितरण गरिएको प्रेस वक्तव्यमा यसअघि नै घोषित माघ २८ गते काठमाडौँमा हुने विरोध प्रदर्शन र सभा यथावत राख्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै माघ २२ गते काठमाडौंमा हुने भनिएको युवा र्याली माघ २८ पछि हुने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यस्तै नेकपाको दाहाल-नेपाल निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले बुधबार साँझ काठमाडाैंकाे प्रदर्शनीमार्गमा राँके जुलुस निकालेकाे छ ।प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्रीको कदमको विराेध गर्दै उनीहरुले जुलुस निकालेका हुन् । ‘भोलि बन्द सफल पारौं, केपी ओली मुर्दावाद, प्रतिगमन मुर्दावाद’ लगायतको नारासहित उनीहरुले राँके जुलुस निकालेका थिए ।
नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षले बुधबार पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्व निर्धारित कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर बिहीबार आम हड्तालको घोषणा गरेकाे पूर्व सन्ध्यमा राँके जुलुस निकालिएको हाे ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तलाई इजलासमा प्रश्नैप्रश्न
प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा सरकारका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बुधबार संवैधानिक इजलासमा अनेक प्रश्नको सामना गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषअधिकार दिएको जिकिर गरेका पन्तलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले संविधानको कुन धारामा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार छ भनेर प्रश्न गरे ।
जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संविधानको धारा ७४ मा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो विशेषाधिकार रहेको दावी गरे । इजलासबाट पन्तलाई फेरि प्रश्न सोधियो– प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गतको हो कि उपधारा २ अन्तर्गत ? बहुमत प्राप्त दलको नेताका रुपमा कहिले प्रधानमन्त्री भएको ?
जवाफमा पन्तले भौतिक रुपमा उपस्थिति भएको व्यक्तिलाई परिचयपत्र रहेनछ भनेर अस्वीकार गर्न नसकिने तर्क गरे । संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको विशेषाधिकार नै रहेछ भने यत्रो वर्ष लगाएर बनाएको संविधानमा के परिवर्तन गरिएछ त भनेर फेरि न्यायाधीश सिन्हाले पन्तलाई प्रश्न गरेका थिए । आफूसँग विशेषाधिकार थियो भने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा त्यही धारा प्रयोग गरेको भनेर किन नलेखेको त भन्ने उनको प्रश्न थियो ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७४ ले संविधानमा नलेखिएका कस्तो विशेषाधिकार दिएको रहेछ ? उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ ?’ न्यायाधीश सिन्हाले वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तलाई प्रश्नमाथि प्रश्न सोधे । विशेषाधिकार अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने पन्तको दावी थियो ।
‘संविधानको धारा ७६ को २ र उपधारा ३ अन्तर्गतका प्रधानमन्त्रीले पनि धारा ७४ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछन् त ?’ न्यायाधीश सिन्हाले फेरि प्रश्न गरे । लगत्तै अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले पनि प्रश्न गरे– प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत त पहिला नै लिइसकेको हुन्छ, फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएमा पहिला नै विश्वासको मत लिइसकेको भनेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइरहनु पर्दैन ? त्यस्तो कुरा त संविधानमै प्रस्ट लेखिएको हुनुपर्ने होइन र ?
गोलमटोल जवाफ दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, ‘मैले नलेखिएको कुरा भनेकै छैन ।’ प्रधानमन्त्रीले दुरासय राखेर विघटन गरेको भन्ने रिट निवेदकको दावीमा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, ‘गणतन्त्र ल्याउन प्रधानमन्त्रीको योगदान छैन भन्न म सक्दिनँ । जनतामा जाँदैछु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दा रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश किन मागेको ?’